Abaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo banokundwendwela iSydney ukusuka nge-1 kaNovemba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » Abaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo banokundwendwela iSydney ukusuka nge-1 kaNovemba
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
INkulumbuso yaseNew South Wales (NSW) iNkulumbuso uDominic Perrottet
INkulumbuso yaseNew South Wales ithe lixesha lokuba ivule ukunceda ukuvuselela uqoqosho, olonakaliswe kakubi ngurhulumente malunga neenyanga ezine zokuvalelwa kwe-COVID-19.
I-Australia ivale imida yayo ngo-Matshi 2020 ukuphendula ubhubhane we-COVID-19 kwihlabathi liphela.
ENew South Wales, inani labantu abagonywe ngokupheleleyo lifikelele kuma-77.8%, ngelixa i-91.4% ifumene idosi enye ye-COVID-19.
Uqoqosho lwaseNew South Wales lonakaliswe kakubi kukutshixeka kweenyanga ezine kwi-COVID-19.
INkulumbuso yaseNew South Wales (NSW) u-Dominic Perrottet ubhengeze namhlanje ukuba Sydney iya kuvulela abagonyo bangaphandle abagonyelweyo ngokupheleleyo, ngaphandle kwemfuneko yokuvalelwa bodwa, ukuqala ngo-Novemba 1, 2021.
“Kufuneka sibuyele emhlabeni. Asinakuhlala apha kubukumkani bobukumkani. Kufuneka sivule, ”yatsho inkokheli yelizwe lase-Australia elinabemi abaninzi ngolwe-Sihlanu.
I-Australia ivale imida yayo ngo-Matshi 2020 ukuphendula ubhubhane we-COVID-19, ivumela ukungena phantse kuphela kubemi nakubemi abasisigxina ekunyanzelekileyo ukuba bangene kwihotele yeeveki ezimbini yokuvalelwa bodwa ngendleko zabo.
Inkulumbuso yase-Australia u-Scott Morrison uthe ekuqaleni kwalenyanga uhambo lwaphesheya kwezilwandle luza kubuya kanye xa i-80% yabantu kwilizwe elithile begonyiwe ngokupheleleyo, kodwa babeza kufumaneka kwasekuqaleni e-Australia kwaye bafuna ukuvalelwa bodwa ekhaya.
ENew South Wales, inani labantu abagonywe ngokupheleleyo sele lifikile kuma-77.8%, ngelixa i-91.4% ifumene idosi enye ye-COVID-19.
Nangona kunjalo, iNkulumbuso ye-NSW ithe lixesha lokuba ivule ukunceda ukuvuselela uqoqosho, olonakaliswe kakubi ngurhulumente kufutshane neenyanga ezine ze-COVID-19.
"Ukuvalelwa ehotele, ukuvalelwa ekhaya yinto eyadlulayo, sivula iSydney neNew South Wales kwihlabathi," utshilo uPerrottet.
NgokukaPerrottet, abo bafika Sydney Kuya kufuneka kuqala ubonise ubungqina bokugonywa kunye novavanyo olubi lwe-COVID-19 ngaphambi kokukhwela inqwelomoya eya e-Australia.
Ukususwa kweemfuno zokuvalelwa yedwa kuya kunceda uhambo lwamanye amazwe oluya e-Australia kwaye kungenzeka ukuba lwamkelwe ngamashumi amawaka abantu base-Australia abathe babambeka phesheya kolwandle ngenxa yomgaqo-nkqubo. Kukwakho nezabelo ezingqongqo kwinani leendawo ezikhoyo kubakhenkethi ababuyayo kwindawo yokuhlala yodwa.
Ngelo xesha, i Umbutho Wezonyango wase-Australia, Elimele oogqirha belizwe, ngolwe-Sihlanu walumkisa umfuziselo walo wabonisa ukuba inkqubo yezempilo yelizwe ayinakukwazi ukumelana nokuthontelana kwabaguli be-coronavirus emva kokuba ilizwe livuliwe kwakhona.